Cabdullaahi Itoobiya oo Shaqadii Laga Joojiyay & Cabdifataax oo Digniin Kama Danbays ah la Siiyay – Rasaasa News
Cabdullaahi Itoobiya oo Shaqadii Laga Joojiyay & Cabdifataax oo Digniin Kama Danbays ah la Siiyay
Jijiga, August 17, 2014 – Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga waxay sheegeen in labada Madaxweyne ku xigeen ee Deegaanka Soomaalida; Cabdullaahi Itoobiya iyo CabdiFataax Maxamuud lagu eedeeyay xidhiidh in ay la leeyihiin Jabhada ONLF, kadib markay hayadaha amniga ee heer deegaan iyo hogaaminta xisbigu, kulamo dag dag ah ooy shalay galeen ku qiimeeyeen
xidhiidh inay la leeyihiin ONLF iyo inay boro bagaan ka dhan ah dawlada deegaanka faafiyeen labadii todobaad ee u danbaysey.
Labada Madaxweyne ku xigeen ee Cabdullaahi Ethiopia iyo Cabdifataax Maxamuud oo lagu eedeeyay inay la xidhiidhaan ONLF una gudbiyaan sirta dawlada, iyagoo u sii mara dad iyaga la shaqeeya. Sida uu noo sheegay sargaal sare oo ka qayb galay shirka security council-ka shalay oo naga codsaday inaan magiciisa qarino, waxaa Cabdulaahi Itoobiya lagu eedeeyay inuu suuqa gashaday inay dawlada dhexe madaxweyne ka dhigayso, loona soo dhigay caddayn in walaalkii iyo dad kale oo isaga ku dha dhaw laga maqlay warkaasi.
Sidoo kale ayaa Cabdulaahi Itoobiya lagu qiimeeyay xildhibaan Muxumed Balbaleyti oo ah sargaal sare oo Xafiiska Nabadgalyada gaar ahaa qaybta baasa boorka ka shaqeeya uu habeen walba saq-badhkii u yeedho una dhiibo warar been abuur ah si loogu soo qoro websiteyada ONLF. Cabdullaahi Itoobiya ayaa sida warku nagu soo gaadhay qirtay eedaymahaas, isagoo sabab ka dhigtay inuu tuhmay in xilka laga qaadayo, sidaas darteedna uu go’aansaday inuu sii qaso wuxuu qasi karo. Shirkaasi ayaa lagu go’aamiyay Cabdulaahi Itoobiya in shaqada laga joojiyo, warbixinta shirkana loo gudbiyo golaha wasiirada iyo guddiga fulinta si ay go’aan uga gaadhaan.
Dhanka kale waxaa isna shir ay isugu yimaadeen hogaaminta sare ee xisbiga lagu qiimeeyay M/weyne ku xigeenka ahna wasiirka Caafimaadka Cabdifataax inuu isna si lamid ah Cabdulaahi suuqa gashtay madaxweyne in laga dhigayo, isla markaana uu lacago badan oo uu ka dhunsaday talaalka booliyada u adeegsaday boro bogaando iyo dacaayado ka dhan ah dawlada. Cabdifataax ayaa la siiyay digniin kama danbays ah, waxaana naloo sheegay inuu shirkaasi kadib telefoonada dansaday gurigiisana aanu ka soo bixin.
Wararka xalay la isla dhex marayey magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in Cabdi Iley iyo Maxamed Rashiid ay green-light ka soo heleen dawlada federaalka inay talaabo ku haboon ka qaataan labada Madaxweyne ku xigeen oo ay isla qaateen inay caqabad ku yihiin nidaamka dawliga ah. Cabdullaahi Itoobiya iyo Cabdifataax ayaan culays siyaasadeed ku lahayn deegaanka, ayna u muuqato inay u fashilmeen sidii M/weyne ku xigeenadii ay badaleen ee Axmad Qabyo iyo Suldaan Wali.
Munaasabada Xuska 15-ka August oo Lagu Qabtay Dalka Yemen iyo Masuuliyiin ka Qayb Gashay
ONLF oo Kordhisay Weerrarada ay ku Qaado Ciidamada Atoobiya